ဇော်အောင်(မုံရွာ) – မဟာဓါတ်အားလိုင်း၊ ရေအား၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဓါတ်ငွေ့လျှပ်စစ် ဆက်ရန်ရှိသေး | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆူပရီ ကုမ္မဏီကြီးက မင်းကင်းအမတ်ကို အခွင့်ရရင် အရေးယူဖို လုပ်မယ်ဆိုတော့၊ မင်းကင်းအမတ်က မှားယွင်းပြောဆိုတယ်လို့၊ သူတို့ ဖေ့ဘုတ်မှာ အတိအလင်း ရေးပါတယ်။ အာဏာရှိသူထက် ငွေရှိသူကို ပိုကြောက်နေရတဲ့ ခေတ်ဖြစ်လို့ သူ့ဖေ့ဘုတ်မှာ ၀င်မန့်တဲ့သူ တယောက်မှ မတွေ့သေးဘူး။ ထားပါတော့။ ငါးကြီးကြီး စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီး ကြော်စားဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ နှုတ်ထွက်တာနဲ့ပဲ ပြီးသွားသလို ဆိုပေမဲ့၊ အဂတိ တိုက်ဖျက်ရေးမှာ နောက်ကွယ်က လက်မဲကြီးတွေ သတိထားကြဖို့၊ ဟိုတုန်းက ဆိုးခဲ့၊ ခိုးခဲ့၊ ကံဇာတကောင်းလို့ ရခဲ့တဲ့ အထုပ်အပိုးတွေကို .. အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်က ထွက်ပြီး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာ ရင်းနှီးကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ကတော့ နည်းပညာပါတဲ့အတွက်၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ လောင်စာဆီ၊ မော်တော်ကား စတဲ့ လုပ်ငန်းများနဲ့ မတူပါဘူး။ ပြိးတော့ လူတစ်စုက လက်ဝါးအုပ်ထားကြတယ်ဆိုတဲ့အတွက် စူပရီကုမ္မဏီကို စွပ်စွဲခြင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ အပြန်အလှန် ပြောဆိုတာကို ခွင့်ပြုရပါတယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို မှားယွင်း ပြောဆိုတဲ့အတွက် အခွင့်ရရင် အရေးယူဖို့ ကုမဏီဖေ့ဘုတ်မှာ ကြေငြာရဲတာလဲ ဒိကုမ္မဏီကြီးက “ပိုကြောက်စရာ” ဖြစ်လာပါတယ်။ ပွဲကတော့ ကြည့်ကောင်းမယ် လို့ ကွန်မင့် ကြပါတယ်။
ဆူပရီကုမ္မဏီ ၃နှစ်ကြာ လေ့လာပြီးအစီရင်ခံစာ ထုတ်တာနဲ့ ပြောရရင် ဆူပရီ ကုမ္မဏီ ဧရာမကြီး လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။ World Class – China Guadian Co.Ltd တို့လိုမျိုး မဟုတ်ဘဲ ငွေမရှိ. စီးပွားပညာသိပ်မတတ်တဲ့ ကျနော်အပါဝင်၊ အင်ဂျင်နီယာ ဖေ့ဘုတ်အုပ်စုက ဒေါက်တာဝင်းထိန်၊ ဦးထွန်းထွန်း၊ ကိုဝင်းထိန်ဦး၊ စတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ တွေတောင် F.S Feasibility Study လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် ကိုယ်တိုင်လဲ ကာကွယ်ပြောရတယ်။ သူက တာဝန်အရှိဆုံး မို့လို့ သူပဲ ဆုံးဖြတ်ပါတယ် ဖြေသွားပါတယ်။ သမ္မတဦးဝင်းမြင့် မိန့်ခွန်းမှာလဲ ၃နှစ်အတွင်း ၃ဆ လျှပ်စစ်တိုးတက်အောင် လုပ်မယ် ဆိုပြီး၊ သူက တင်ပြတာကို သမ္မတကြီးက ပြောရတာ လျှပ်စစ်အကြောင်းသိပ်မသိသေးတဲ့ သမ္မတကြီးကို. ပြန်ကိုးကားသွားတာလဲ မပြောသင့်ပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့ ရေအား၊ ကျောက်မီးသွေးအား တွေ ကန့်ကွက်ခံရလို့ ဒီ၂နှစ်အတွင်း ဘာတခုမှ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ရေအားက လုပ်ရင် ၈နှစ်လောက် ကြာမယ် ဆိုပြီး Wrong Information ပေးသွားပြန်ပါတယ်။ သူ့ခမြာလည်း အရင်က ဒါလောက် ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှု မခံရဖူးဘူးလေ။ အင်တာဗျူး ဆိုတာလဲ မေးတာ မဖြေလဲရတယ်။ အခု လွှတ်တော်က ဥပဒေပြုမှု အမြင့်ဆုံးသော နိုင်ငံတော်အာဏာ တည်ရှိရာနေရာမှာ သူမဖြေလို့မရပါ။
“ ရေအားလျှပ်စစ်၊ ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ် တွေ ကန့်ကွက်ခံရလို့ ”ဆိုတာ နည်းနည်းလေး ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ပြည်သူလူထု ကန့်ကွက်တာ ဧရာမစီမံကိန်းကြီးတွေပါ။ ကုမ္မဏီတွေကလဲ လာဘ်စားမှတော့ နည်းနည်းမစားဘူး၊ တသက်စားမကုန်၊ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ချမ်းသာအောင် လာဘ်စားပြီ ထောင်ထဲဝင်ဆိုလဲ ၁၅နှစ်ပေါ့။ သေဒဏ် အကြီးအကျယ် ပေးနေတဲ့ တရုတ်ပြည်တောင် လူလောဘ နိုင်ငံတော်အဆင့်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ၊ တပ်မတော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ သေဒဏ် တကယ်သတ်ပစ်တာ ခဏခဏ ပါပဲ။ ဒါလဲ လောဘကို မသတ်နိုင်ပါ။ ဥပဒေဘောင်ထဲက ငွေ-အာဏာ သုံးပြီး အဂတိလိုက်စားတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ရေအား၊ ကျောက်မီးသွေးအား လျှပ်စစ် ထုတ်ရင် အခု ကန့်ကွက်ခံရတဲ့ ၁၀၀၀ မဂါဝပ်၊ ၁၅၀၀ မဂါဝပ်၊ ၃၀၀၀ မဂါဝပ် .. အကြီးအကျယ် လုပ်စားမဲ့ ၀ိသမ တဖက်သတ် စာချုပ်များကို ဆက်မလုပ်ဖို့ ကန့်ကွက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံလိုမျိုး စနစ်တကျ လုပ်နိုင်ရင် နည်းပညာနဲ့ လူထုထောက်ခံမှု ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၀ိသမ၊ မတရားစာချုပ် နှစ်၅၀ လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာ မြန်မာက ၁၀% ပဲ လျှပ်စစ်ရမယ် ဆိုတာမျိုးက အခု ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်း အထိ ၇.၅ဘီလျံ စီမံကိန်း တင်ပြနေတယ်။ စိတ်ပျက်စရာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စီးပွားအကြံပေး ရှောင်တန်နယ်က မေလ စင်ကာပူမှာ မြန်မာ့ စီးပွားလေး အလာအလာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာ တရုတ်အကြွေးထဲ နစ်မဲ့ China Debt Trap စီမံကိန်းမို့ မလုပ်ဖို့ တင်ပြထားတယ် ဆိုပါတယ်။
မြန်မာတွေ ရေအား၊ ကျောက်မီးသွေးအား 1mW to 50mW အလတ်တန်းစား လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ကြပါလား။ ၃၃ကေဗီ၊ ၆၆ကေဗွီ၊ ၂၃၀ကေဗွီ၊ အခု ၅၀၀ဗို့ ကေဗွီ မဟာဓါတ်အားလိုင်းတွေ ဆွဲကြပါလား။ ဒါလောက် အလတ်စားလေးတွေ လုပ်ရင် ဘိလပ်မြေစက်ရုံမှာ ကျောက်မီးသွေးသုံးတာ မကန့်ကွက်သလို ဒေသခံတွေကို ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လဲ သူတို့ ကျေးရွာအတွက် ကျောင်းတခု သိန်း၁၀၀၊ ဆေးခန်းတခု သိန်း၅၀၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း တမိုင် ၁၀သိန်း … ဆောက်ပေးလိုက်ပါလား။ နေရောင်ခြည်သုံး တနိုင်မီးထွန်းစက် တအိမ် ၂သောင်း နဲ့ အိမ်၅၀လောက်ကို ၁၀ သိန်းလောက် လှုဒါန်းပြလိုက်ပါလား။ အခုတော့ စူပရီမီ ရော၊ တိုတယ်ရော.. သူတိုကအကြံက ကန့်ကွက်ရင် လုံထိန်းရဲ ပိုက်ဆံပေးပြီး ခေါ်ထိန်းတဲ့ လက်ပတောင်းတောင် ဇတ်လမ်းကို လုပ်ချင်နေတဲ့ ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။
ပုံ – Ministry of Electricity ,
Download Link – https://goo.gl/xKXpYJ
ရည်ညွှန်း – ဇော်အောင်(မုံရွာ) ရေး ပြည်မြန်မာ မီးထိန်ထိန်သာဖို့အရေး လျပ်စစ်ကဏ္ဍ ဆောင်းပါးများကို မိုးမခက ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ http://moemaka.com/archives/63065